ओपो रेनोटू एफ र डल्बीको संयोजन - आर्थिक पाटी
काठमाडौं । मिडिया, सृजनशिलता, मनोरञ्जन लगायतका लागि ओपो रेनोटू एक प्रिमियर सिरिज हो । यस पक्षमा रेनोटू एफको सिनेमा स्तरको श्रब्य गुणस्तरपनि कुनै पक्षमा कम छैन । रेनोटू एफमा प्रयोगकर्तालाई उत्कृष्ट श्रब्य अनुभव पस्किने सोचका साथ डल्बी एट्मस, ब्यवस्थित स्टेरियो स्पिकर्स र चार विशेष अडियो मोड लगायत अडियो फिचर्सको ब्यवस्था गरिएका छन् । रेनोटू एफमा उपलब्ध गरिएको उत्साहजनक डल्बी एट्मसले प्रयोगकर्ता (श्रोता)लाई जीवन्त श्रब्य अनुभव प्रदान गर्छ ।
सराउण्ड साउन्ड ईफेक्टमा सटिकता दिँदै गनशट जस्ता आवाजको नजिक तथा टाढाबाट चलेका अवस्था सहजै छुटाउन सघाउने यस्ता प्रविधिले प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरुमा विशेष सघाव पुयाउँछ ।
समग्रमा भन्नु पर्दा हरेक प्रयोगकर्ताले आफ्नो पृथक आवश्यकता अनुसार फोनले सम्प्रेषण गर्ने आवाजमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण राख्न सकुन् भन्ने तिर ओपो रेनोटू एफमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।
साथीलाई मोबाइल गेमका लागि च्यालेन्ज गर्नुछ ? गेम मोड अन गर्नुहोस ।
संगीतको मज्जा लिनु छ ? रकिङ म्यूजिक मोड सक्रिय गर्नुहोस् ।
रोमाञ्चक सराउण्ड साउन्ड सिनेमाको मुडमा हुनुहुन्छ ? मुभी मोड सक्रिय गरी शोको मज्जा लिनु होस् ।